Ajụjụ 5 ga - eme ka ị ghọtakwuo mgbawa nke ugwu Calbuco | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajuju 5 ga - eme ka ị ghọtakwuo mgbawa nke ugwu ugwu Calbuco
Sergio Gallego | | Ihe gbasara ihu igwe
Izu gara aga, e nwere otu akụkọ ga-enye okwu kachasị na afọ a 2015, mgbawa na mberede nke Igwe ọkụ ọkụ Cabulco Na ndịda nke Chile. Mgbe ị hụrụ ihe ngosi na-awụ akpata oyi n'ahụ nke ugwu mgbawa na-arụ ọrụ, ị ga-ahụrịrị Ọtụtụ ajụjụ. Ọzọ m ga-anwa ịnye gị azịza nye ajụjụ ndị a na n'ezie ghọta nke ọma ihe niile metụtara mgbawa ugwu Cabulco.
1 Gịnị kpatara ọgbụgba ahụ na mberede?
2 Ogologo oge ole ka ọkụ ọkụ ahụ ga-anọru?
3 Kedu ihe dị n'ime ugwu ọkụ Cabulco?
4 Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na mmiri zoo?
5 Osimiri Osorno nwere ike ịgbawa?
Gịnị kpatara ọgbụgba ahụ na mberede?
Dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara si kwuo, 95% nke ntiwapụ a na-ahụkarị ha tupu oge eruo n'ihi ụda, isi ísì ma ọ bụ obere mgbawa. Agbanyeghị, enwere 5% nke ikpe na enweghị ịdọ aka na ntị ma ọlị. Nke a bụ ihe mere na Ugwu ugwu Calbuco.
Ogologo oge ole ka ọkụ ọkụ ahụ ga-anọru?
N'ihi ụdị ugwu mgbawa, afọ ya na ogo ya, ugwu ahụ malitere na Wednesde gara aga nwere ike ịgbatị ogologo ụbọchị ole na ole na ọbụna izu ole na ole.
Kedu ihe dị n'ime ugwu ọkụ Cabulco?
Nke a ugwu mgbawa nwere a nnukwu silica, nke a na - eme ka lava na - ahụ viscous karịa nke nkịtị ma na - aga nwayọ nwayọ. Na mgbakwunye na nke a, o nwere ọtụtụ mmiri yabụ ọgbụgba ahụ bụ ezigbo ihe mgbawa.
Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na mmiri zoo?
Ọ bụrụ na mmiri zoro n'oge a, ọnọdụ a ga-agbagwoju anya n'ihi na enwere ike imepụta oku ahụ mmiri ozuzo acid. Na mgbakwunye, enwere ike dị elu maka idei mmiri na mpaghara ahụ dum.
Osimiri Osorno nwere ike ịgbawa?
Dị ka echiche nke ndị ọkachamara n'ọhịa, ọ dị nnọọ eleghi anya ebe ọ bụ na ha dị iche iche ugwu mgbawa na ha na-anaghị ejikọ ọ bụla ọzọ. Daysbọchị ole na ole ọrụ ga-agbadata na osisi ike na ihe egwu kasịnụ nwere ike isi na ya pụta alluvium.
Echere m na m edozila gị obi abụọ ọ bụla na mgbawa ugwu na-awụ akpata oyi n'ahụ nke Kabulco nke ugwu na-agbọpụ ọkụ nke Chile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajuju 5 ga - eme ka ị ghọtakwuo mgbawa nke ugwu ugwu Calbuco
Ala ọma jijiji na Nepal, nke ndị sayensị kwuru
Mgbanwe ihu igwe na-emetụta ụmụ nwanyị dị ime